कृष्णप्रसाद सिटौलाको घर कम्पाउन्डमा बम पड्केको समाचार आइरहेको थियो ।
बढ्यो सुरक्षा चिन्ता
काठमाडौं, १४ मंसिर | मङि्सर १४, २०७४
मंगलबार मात्रै गृहप्रवक्ता सार्वजनिक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो भएको र पहिलो चरणबाट पाठ सिक्दै थप चुस्त बनाइने बताइरहेका थिए । सोही दिन बिहानै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता तथा झापा ३ का उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौलाको घर कम्पाउन्डमा बम पड्केको समाचार आइरहेको थियो । सोही दिन विराटनगरमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार तथा एमाले नेता लालबाबु पण्डितलाई लक्षित गरी बम प्रहार भयो । उता दाङमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमस्थलनजिक भएको बम आक्रमणमा घाइते भएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको हिजो उपचारका क्रममा निधन भएको छ । हिजै उदयपुरमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार तथा पूर्वसांसद नारायण कार्की चढेको गाडी एम्बुसमा पर्दा उनीलगायत सो गाडीमा सवार चालकसहित अन्य सहयोगी घाइते भएका छन् । गम्भीर घाइतेलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ । मंगलबार मात्रै लगनखेलमा पनि बम पड्केको छ । दुई दिनभित्र घटेका यी गम्भीर घटनाले देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था निकै भयावह बन्दै गएको र यसले शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट आमनागरिक वञ्चित हुँदै गएको संकेत गरेको छ । यो निकै गम्भीर अवस्था हो ।
दुई दिनभित्र घटेका विस्फोटका घटनाले देशमा शान्ति–सुरक्षाको अवस्था भयावह बन्दै गएको र यसले शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट आमनागरिक वञ्चित हुँदै गएको संकेत गरेको छ
तर, यति भइसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा यस्ता गतिविधि कसले र किन गरिरहेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बताउन सकेको छैन । यो कसले, किन र कसरी गरिरहेछ ? सरकारले केवल घटनापछि खोजी गरेजस्तो या कतैबाट सूचना आएपछि सामग्री बरामद गर्न या बम डिस्पोजल गर्न जाने तर यसलाई रोक्न प्रयास पटक्कै नगर्ने गरिरहेको त छैन ? अहिलेसम्म पनि यस्ता घटना घटाउने संगठित समूह या व्यक्तिबारे सरकारले केही नबताउनुको अर्थ कतै सरकारी संयन्त्र नै यस्तो घटना घटाउन सहयोगी बनिरहेको त छैन भनेर आशंका किन नगर्ने ? होइन भने कुनै आपराधिक या राजनीतिक समूह, जसले गरेको भए पनि सरकारको कर्तव्य कमसेकम शान्तिपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने र निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्ने हो । त्यस्तो अनुभूति आमनागरिकले किन गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन ज्यान जाने गरी एकदम नजिकबाट आक्रमण हुँदा पनि आक्रमणकारी पक्राउ पर्दैनन् र निरन्तर दिनदिनै र छिनछिनैजसो यस्ता घटना भइरहन्छन् ?
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म भइरहेका यी घटना सामान्य तयारीका आधारमा अवश्य पनि गराउन सकिन्न । सामूहिक र संगठित प्रयासविना यसो गर्न सम्भव नै छैन । सरकारले तीन तहको सुरक्षा घेराको चर्चा गरिरहेको भए पनि व्यवहारमा त्यसले कुनै परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था तन्किनु र २१ मंसिरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनसम्म बढ्दै जाने अवस्था देखिनु अवश्य पनि चिन्ताको विषय हो । प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हालेको गृह मन्त्रालय यस मामिलामा अक्षम देखिँदै बिल्कुल तयारी अवस्थामा नरहेको प्रस्ट हुँदै छ । लामो समय राजनीतिको सिकार भएको प्रहरी संगठन या गुप्तचर संस्था या राजनीतिक नेतृत्व को कति यसका लागि जिम्मेवार छ, तिनलाई उत्तरदायी बनाउन ढिलो नगरियोस् ।